SULDAAN MICHIAVELLI IYO QAYLO DHAANTA AFKA BAALKIISA LAGA YIRI .
Posted to the Web 21: 58 GMT December 10, 2001
Suldaan Michiavelli wuxuu ahaa wiil amir ah , una dhashay dalka Talyaaniga dhow qarni ka hor. Ninkaa oo lana oran jiray, Principe Michiavelli wuxuu abwaan ku ahaa culuumta siyaasadda abwaan, siiba falsfadda hal dhigeedu yahay : “The END JUSTIFY THE MEANS” oo marka loo rogo afkeenna la oran karo, ayadoo aan xaraf xaraf loo fasirin “Daantaadoo aad gaartaa waxay xaalmarin u tahay sida aad ku gaartay”.
Macnuhu waa uun yoolkaaga gaar, adigoo aan dib u eegin wax kale sida aad ku gartay.
Mataal ahaan, waxay xikmaddaa qaloocan tibaaxaysa sida tan “qofku ha sameeyo wuxuu doono asagoo aan u abayeeleen diin iyo dhaqan, ama moraalkaba “damiirka”. Waxay kaloo falsfadu qabtaa in laluush luflufashada iyo u nacmleenta cidda kaa saraysa, iyo waliba danaysiga, asagoo qofkaa uga gol leeyahay aad manfac aduun iyo darajo ku heshid, kuwaasoo aan waba dhimayn, mar haddii qofku dantiisu ku GAARAYO.
Sidaa waxaa la mid ah, qaar ka mid Odayaasha Puntland iyo Siyaasiyiintoodaba iyo sida ay ugu howlan yihiin aad kursi iyo aduun ku heshaan, iyagoo aan u aabo yeelin wixii ka soo gaara Puntland oo burbur iyo walaahow ah.
Nasib darro, dadkaa waxaa ugu horeeya dad ka soo qabtay darajoon sar sare dowladii rayad ahayd oo ku iibsan jiray sandareetada codaadka beelahooda iyo kuwo macaan dheregto ah oo la saan qaaday xukinkii xaaranta banaystay ee Siyaad Barre iyo weliba kuwo, uu Afweyne gacantiisa ku abuuray, sida Garaase, King Kong iyo Shirwac.
Ray’iisul wasaaran ahay, ama Dubai ayaa xisaabu ii taal ayey dantu ka badin weyday, iyadoo aan lagu xisaabtamin marna dareenka umadda somaaliyeed o wali xusuusan warshadii Mareerey iyo canshuurta suuqa xoolaha , sidii ay Xassan Abshir iyo Cali Khalif ugu takri faleen. Abooyaalow, mala xisaabtami doonaa oo xaqqa ma gulaysan doona!
Ka dib markii ay soo baxeen qalaasihii kooxda Carte iyo Al-Itahad ee ka rideen geyiga Puntland ayaa daaha laga qaaday 3 bayaan oo kala duwan oo lagu tilmaamay nasixooyin lagu soo celinayo xasiloonidda dalkeena.
Bayaan kowaad , waa layska ogyahay oo waa midkii ka soo yeeray Issimo tiro yar, oo kooxaha mayal adag iyo Carte u adeegayay. Mashaqadday lugaha ay la galaynna , waa taa qaar ka soo saartay Puntland.
Bayaanka labaad wuxuu ka soo yeeray niman isku sheegay aqoon yahanno KA DHEX DHEXAAD ah qaska Puntland, oo fadhigoodu yahay Nairobi. Ugu dambeen, qayb seddexaad oo soo saartay QAYLO DHAAN, afka baalkiisa. Saaran kadib markii 3 bilood laga joogay dhibaatii ku habsatay Puntland!
Waxaa layiri “Haddii qaylo ka soo yeerto masaajidka, xagge loo cararaa?”.
Taasi waxaa la mid ah: haddi nimankii looga fadhiyey in ay badbaadiyaan Puntland., ay iyagu ka shaqeeyaan sidii, loo cakirin lahaa, xaaladeeda dalkooda oo murugaysan, kuwasoo si dadban iyo si bareerba ah ugu faanayaa in Carte lala yeeshay shirar, oo waliba qarkood, ka qaybgaleen mansabyo.. Taasi la fili waayey ku noqotay ninka shaarica (caadiga ) ah iyo ra’yi weynaha reer Puntland, waliba markii Cali Khalif iyo Ina Salaad Boy, qirteen, inay hayaan saxiixyo uu arrintaas ku yeelay, ninkii lagu han weynaa goboladda Puntland uguna culays weynaa, dhanka siyaasadda, Mudane Cabrizaaq Xaji Xuseen.
Mudane Cabdrizaaq, waxaa mar labaad soo baxday, inu ku deg dego qaatona talaabooyin toolkii ka caraysiiya , asagoo aan tashi wadaag la samayn dadkiisa. Laakin waxaa jirta in intuba ay fashil iyo guul darro ka raacday. Waxaa ka mid arrimahaas , Jabuuti Kow iyo Jabuuti Labo (Madaxa dib u heshisiinta nabadda Carte oo marin habowka ah).
Mudane Cabdrizaq iyo kooxdiisa, waxaa looga fadhiyey QAYLO DHAAN DEG DEG AH oo ku wajahan dhalaan gooricii Kismayo ay ka geysteen Isbaxaysiga Galguduud iyo kooxaha Carte, iyo Al-Barkaat. Waxaa la yiri: “Khayrul-birri caajilihi” oo micnaheedu tahay “Sama falka waxaa ugu fiican midka lagu DEG DEGGO ”.
Laakin mar ay xeero iyo fandhaalkeed kala dhaceen, muxuu tarayaa in afka baalkiisa laga yiirhado, “WAAWAREEY, DADOW IS DAAYA!. Taasi Nasiixo meel ku ool ah ayey noqon lahayd haddi la soo jeedin lahaa 3 biloodoo oo ka horaysay inta aan gacan ka hadlku ka dhicin Puntland. Maxaa la falkayey inta tolku ii isku soo fara bahsanayey? Daawad wacan !!!!! NASIXAADAAS oo waqtigeedii DHAMAATAY, kama duwanna sida dad badani ay qabaan dad badan , ayadoo lagu qasbayo nin TB dilootay , Benashiliin waqtigeedi dhacay ‘EXPRIED”.
Kooxda labaad ee caadaysatay inay iska dhuuqaan, waxay UN, dalka soomalidda ugu yaboohdo , iskuna tilmaama kooxda aqoon yahaniinta oo aan maanta cimri u dhiman uusan jirin, waxayba durbadii soo saareen GO’AAN DHEX DHEXAAD ah.
Oo maxuu tari talobixinta nimankaa lugina usaran tahay gayiga Puntland, lugina u saaran tahay diyrada miirooga oo u sii jeedda Nairobi, si ay uga bixiyaan warbixin howlaha horumarinta (burburka) ee UN kawaddo Puntland.
Ayagga la yaab malahoo Mr. Kent Randolph, wakiilka Ina Salad Boy , ee, nasib darro, UN-ta u fadhiya dalka Kenya , ayaa ka sugayaa sidii lagu bixiyay Qaansheegtooyinkii xisaabihii meela hay ku baxeen, waliba ayadoo loo tirinayo inay ku baxeen kobcin bulshadeed iyo kan dhaqaaleedba ee Puntland.
Inta soo hartay oo madaalayaasha ahna, isku daalin mayee, ee reer Puntland waa ay iska ogyihiin howlahoodi aan nadiifka ahayn oo ay ka geysteen gobolladda Puntland iyo Jubboland.
Gebogabadii, inkastoo somaaliddu aysan xikmad ku yareen, haddana waxaan u soo qaatay Suldaan Michiavelli, aqoonta caalimgu u leeyahay oo lagu tilmaamo sida dhuuniga aan xalaasha ahayn , bulshooyinka ay u saameeyso, meel kastoo ay joogaan iyo milad kastoo oo ay heestaan.
Haddiise la raadsho maahmaah u dhiganta oo somali ah , waxaa la oran kara midaan “Nin soori qaaday iyo nimay seefi qaaday, waxaa roon………” Iska dhamaystiro akhriste.
Allow Puntland dadkeeda ka badbaadi!